Siyaasadda Kukiyada (EU) | Citeia
Inicio/Siyaasadda Kukiyada (EU)
Nidaamkan cookie-ka waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Abriil 26, 2021 wuxuuna khuseeyaa muwaadiniinta Aagga Dhaqaalaha Yurub.
Shabakadeena, https://citeia.com (hadda kadib: "shabakada") waxay isticmaashaa cookies iyo tikniyoolajiyadaha kale ee la xiriira (si loogu sahlo, tikniyoolajiyadda oo dhan waxaa loogu yeeraa "cookies"). Kukiyada sidoo kale waxaa dhigaya dhinac saddexaad oo aan qandaraas la galnay. Dukumiintiga soo socda waxaan kugu wargalineynaa isticmaalka cookies-ka websaydhkayaga.
Cookie waa feyl yar oo fudud oo si wada jir ah loogu soo diro boggaga degelkan iyo biraawsarkaagu wuxuu ku kaydiyaa darawalka adag ee kombiyuutarkaaga ama qalab kale. Macluumaadka la keydiyay waxaa dib loogu celin karaa server-keena ama qeybta saddexaad ee khuseeya booqashada xigta.
Qoraalku waa qayb ka mid ah koodhka barnaamijka ee loo isticmaalo in lagu sameeyo degelkeenna si sax ah iyo is-dhexgal ah. Koodhkani wuxuu ku shaqeeyaa adeegeena ama qalabkaaga.
4. Waa maxay nalka shabakaddu?
Aaladaha websaydhka (ama pixel tag) waa qoraal yar oo aan la arki karin ama muuqaal ah oo ku jira websaydh loo adeegsado in lagu raaco taraafikada webka. Tan awgeed, xog kala duwan oo adiga kugu saabsan ayaa lagu kaydiyaa nalka internetka.
Kukiyada qaarkood waxay hubiyaan in qaybo ka mid ah websaydhka si sax ah u shaqeeyaan iyo in dookhaaga isticmaalaha uu sii wado in la xusuusto. Adoo ku dhejinaya kukiyada shaqeynaya, waxaan kuu fududeyneynaa inaad soo booqato degelkeenna. Sidan oo kale, uma baahnid inaad si isdaba-joog ah u gasho isla macluumaadka markii aad booqato degelkeenna iyo, tusaale ahaan, alaabtu waxay ku sii jiraan gaadhigaaga wax iibsiga illaa aad ka bixiso. Waxaan dhigi karnaa cookies-kan adiga oo aan ogolaanin.
5.2 Kukiyada falanqaynta
Waxaan u adeegsannaa cookies-ka falanqaynta si aan ugu hagaajino khibrada websaydhka isticmaaleyaashayada. Kukiyadahan gorfaynta leh waxaan ku helnaa aqoonta isticmaalka websaydhkayaga. Waxaan kaa codsaneynaa rukhsad si aad u geliso cookies-ka gorfaynta.
Websaydhkan waxaan ku isticmaalnaa cookies-ka xayeysiinta ah, oo noo oggolaanaya inaan adiga shakhsi ahaan kuu xayeysiino, annaguna (iyo dhinacyada saddexaad) waxaan helnaa macluumaad ku saabsan natiijooyinka ololaha. Tani waxay dhacdaa iyadoo lagu saleynayo astaan ​​aan ku abuureyno qasabadahaaga iyo marinkaaga iyo dibedda https://citeia.com. Kukiyadaas adiga, booqde ahaan websaydhka, waxaad ku xidhan tahay aqoonsi u gaar ah, markaa ma arki doontid isla xayeysiiska wax ka badan hal jeer, tusaale ahaan.
Kukiyada suuqgeynta / raadraaca waa cookies, ama nooc kasta oo kale oo keydinta maxalliga ah, oo loo adeegsado abuurista astaamaha isticmaalaha si loo muujiyo xayeysiinta ama loola socdo isticmaalaha websaydhkan ama degellada kala duwan ujeeddooyin suuq-geyn la mid ah.
Sababtoo ah buskudyadan ayaa loo calaamadeeyay inay yihiin raadraac cookies, waxaan ku weydiisaneynaa rukhsad inaad dhigato.
5.5 badhannada warbaahinta bulshada
Boggeena waxaan ku soo darnay badhano Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram iyo Pinterest si kor loogu qaado boggaga (tusaale "like", "pin") ama lala wadaago (tusaale "tweet") shabakadaha bulshada sida Facebook , Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram iyo Pinterest. Badhannadani waxay ku shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya koodh ka socda Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, iyo Pinterest naftooda. Koodhkani wuxuu furaa cookies. Badhanadan warbaahinta bulshada ayaa kaydin kara oo ka baaraandegi kara macluumaadka qaarkood, sidan ayaa lagu soo bandhigi karaa xayeysiis shaqsiyeed.
Fadlan akhri siyaasada asturnaanta ee shabakadahan bulshada (oo si isdaba joog ah isu badali kara) si aad u ogaato waxa ay ku sameeyaan macluumaadkaaga (shaqsiyeed) ee ay ku farsameynayaan adeegsiga cookies-kan. Xogta ay helaan waa qarsoodi inta suurtogalka ah. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, iyo Pinterest waxay ku yaalliin Mareykanka.
6. Kukiyada la isticmaalo
Kordhinta Xayeysiinta Google
Suuqgeynta / Raadinta
Waxaan u adeegsanaa Waxyaabaha Google Ads Optimization si aan u soo bandhigno xayeysiis. read more
La wadaag xogta
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Xayeysiinta Google Ads.
Ku keydi booqashooyinka goobo badan
Suuqgeynta / Raadinta, Tirakoobka
Waxaan u adeegsanaa Wistia inaan ku muujino fiidiyow. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Wistia.
Kaydi ficilada ay sameeyeen isticmaaleyaasha barta
Dukaameyso haddii isticmaaleygu arkay waxyaabaha kujira
Waxaan u adeegsanaa Complianz maaraynta ogolaanshaha cookie. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Complianz.
Diiwaangeli aqoonsiga siyaasada cookie ee la aqbalay
Tirakoobka, tirakoobka (aan la aqoon)
Waxaan u isticmaalnaa Google Analytics tirakoobka websaydhka. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Google Analytics.
Kaydi aqoonsi adeegsade gaar ah
Tiri oo lasoco aragtida bogga
Waxaan u adeegsannaa Xayeysiiska Google xayeysiinta. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Xayeysiiska Google.
U oggolow gudbinta xayeysiinta ama dib-u-hubinta
xayeysiis / ga-dhagaystayaal
Kaydso macluumaadka ujeeddooyinka dib-u-soo-celinta
Waxaan u adeegsanaa AMP waxqabadka shabakadda. read more
dukaanka amp: *
Kaydi faahfaahinta biraawsarka
Waxaan u isticmaalnaa WordPress horumarinta bogga. read more
Kaydi dookha isticmaalaha
Waxaan u adeegsanaa JetPack xayeysiinta. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee JetPack.
Kaydso taariikhda adeegsadaha adeegsadaha
Waxaan u adeegsannaa CloudFlare adeegyada shabakadda gaarsiinta waxyaabaha (CDN). read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri CloudFlare siyaasadda gaarka ah.
Aqoonso taraafikada webka ee lagu kalsoon yahay
Waxaan u isticmaalnaa Roundcube waxyaabo kala duwan. read more
Waxaan u adeegsannaa Fonts Google si aan u soo bandhigno noocyada websaydhka. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Google Fonts.
Weydii cinwaanka IP-ga isticmaalaha
Suuqgeynta / Raadinta, Waxqabadka, Tirakoobka
Waxaan u adeegsanaa YouTube si aan u muujino fiidiyow. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah YouTube.
Keydso xogta goobta
Waxaan u isticmaalnaa Instagram si aan u soo bandhigno qoraallada bulshada ee ugu dambeeyay iyo / ama badhamada wadaagista bulshada. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Siyaasadda asturnaanta ee Instagram.
Maamul soo noqnoqodka bandhigga
Suuqgeynta / Raadinta, shaqeynaya
Waxaan u isticmaalnaa Facebook inaan ku soo bandhigno qoraallada bulshada ee ugu dambeeyay iyo / ama badhamada wadaagista bulshada. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Facebook.
Kaydso booqashadii ugu dambeysay
Keydso faahfaahinta koontada
Kaydso aqoonsi fadhi gaar ah
Ka hor tag khayaanada
Go'aami xallinta shaashadda
Ka dhig isticmaalayaasha inay galaan
Kaydso oo raadso haddii tabarka biraawsarku shaqeynayo
Waxqabadka, Suuqgeynta / Raadinta
Waxaan u adeegsannaa Twitter si aan u soo bandhigno qoraallada bulshada ee ugu dambeeyay iyo / ama badhamada wadaagista bulshada. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Twitter.
Shaqeynta dheelitirka dheellitirka
Waxaan u adeegsannaa LinkedIn inaan soo bandhigno qoraallada bulshada ee ugu dambeeyay iyo / ama badhamada wadaagista bulshada. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee LinkedIn.
Bixi shaqeynta bogagga iskutallaabta
Kaydi dookhaaga gaarka ah
Waxaan u isticmaalnaa Automattic horumarinta bogga. read more
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri Nidaamka gaarka ah ee 'Automaatik'.
Wadaagista xogta ayaa sugeysa baaritaanka
googlesitekit :: total-ogeysiis
Markaad booqato degelkeenna markii ugu horreysay, waxaan ku tusi doonnaa daaqad pop-up ah oo leh sharaxaad ku saabsan cookies. Isla marka aad gujiso "Save Preferences", waxaad ogolaatay inaan isticmaalno qaybaha buskudka iyo plugins-yada aad ku dooratay daaqadda pop-up-ka, sida lagu sharaxay siyaasaddan cookie-ka. Waad ka joojin kartaa isticmaalka cookies-ka adoo adeegsanaya biraawsarkaaga, laakiin fadlan maskaxda ku hay in websaydhkeennu uu joojin karo shaqada si habboon.
Waxaad leedahay xuquuqaha soo socda marka la eego xogtaada shaqsiyeed:
Xaqa helitaanka: waxaad xaq u leedahay inaad gasho xogtaada shaqsiyeed ee aan ognahay.
Xaqa sixitaanka: waxaad xaq u leedahay inaad dhammaystirto, saxdo, masaxdo ama xayirto xogtaada shaqsiyeed markasta oo aad rabto.
Haddii aad na siiso ogolaanshahaaga si aan u farsameyno xogtaada, waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto oggolaanshahaas iyo in la tirtiro xogtaada shaqsiga ah.
Xaq ayaad u leedahay inaad wareejiso xogtaada: waxaad xaq u leedahay inaad ka codsato dhammaan xogtaada shakhsi ahaaneed qofka mas'uulka ka ah daaweynta iyo inaad si buuxda ugu wareejiso qof kale oo mas'uul ka ah daaweynta.
Xaqa mucaaradka: waad diidi kartaa habsami u socodka xogtaada. Waan u hoggaansameynaa tan, haddii aysan jirin sababo wanaagsan oo loo maareeyo.
Si aad u adeegsato xuquuqdan, fadlan nala soo xiriir. Fadlan eeg faahfaahinta xiriirka ee salka hoose ee siyaasaddan cookie-ga ah. Haddii aad wax cabasho ah ka qabto sida aan u maamulno xogtaada, waxaan jeclaan lahayn inaad nala soo socodsiiso, laakiin waxaad kaloo xaq u leedahay inaad u soo gudbiso cabasho maamulka kormeerka (hay'adda ilaalinta xogta).
9. Dhaqdhaqaaqa, barkinta iyo baabi'inta buskudka
Waad isticmaali kartaa biraawsarkaaga internetka si aad u tirtirto cookies-ka si otomaatig ah ama gacanta ah. Waxaad sidoo kale cayiman kartaa in cookies-yada qaarkood aan la dhigi karin. Ikhtiyaar kale ayaa ah in la beddelo dejinta biraawsarkaaga internetka si aad u hesho farriin markasta oo cookie la dhigo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xulashooyinkaan, la tasho tilmaamaha qaybta "Caawinta" ee biraawsarkaaga.
Fadlan ogow in websaydhkeenu aanu si fiican u shaqeyn karin haddii dhammaan cookies-ka ay naafo yihiin. Haddii aad ka tirtirto cookies-ka biraawsarkaaga, mar labaad ayaa la dhigi doonaa ka dib oggolaanshahaaga markii aad booqato degelladayada mar kale.
Nidaamkan cookie-ga ayaa la waafajiyay cookiedatabase.org Oktoobar 25, 2020